Ngezinye imithombo ehlukahlukene etemibhalo ngokuya evame kwabaningi engaziwa uhlobo omegavers. Fanfiction lesi siqondiso ukudida umuntu engaqaliwe kuphela, okubangela ukuthi imibuzo okuningi kuka izimpendulo. Ngakho onjani isilwane?
Omegavers - kuyini?
Okokuqala, njengoba kuphawulwe ngenhla, kuba zemibhalo eladabuka kunethiwekhi Inthanethi. It lingachazwa ngokuthi umkhathi yokudlala lapho umphakathi yizigaba ezintathu. Akukhona ajwayelekile kithi division phakathi kwamadoda nabesifazane. Ikilasi ngalinye isakhiwo ehlukile, lapho izici ngokobulili musa ukudlala indima ebalulekile. Ngesisekelo ukuvela uhlobo ubeke phansi idivayisi nezimpisi abavamile, lapho kukhona yokwehlayo ehlukanisa umholi kusuka nezinye izilwane, kanye nalokho okuthiwa ipheya ekubhaxabulweni. Isibonelo esifanayo singabonakala imisebenzi omegavers uhlobo.
Njengomthetho, amalungu alesi sigaba abalobi omegaverse ziveza amadoda, akuvamile abesifazane, Nokho, konke kuncike uhlobo athinteke ngendlela ubudlelwane emsebenzini. Lokhu handsome, umuntu omude ngohlamvu ezinhle Imizimba, okuqinile futhi enamandla, kokuba ikhono ukuphila ukuthola omunye, omega bakhe kuphela. Lena ngenye yama-izici omegavers uhlobo. Uyini "omega"? Mayelana-ke kwenye ingxenye sihloko.
Alpha inezici engavamile kwesakhiwo bese kungena abantu abavamile wenduku, futhi lathathwa nezimpisi, okungukuthi engeyokuqala. Phakathi isenzo, uqala ukukhula futhi ngezinye eminye imibhangqwana iphuzu abalingani. Le nqubo ithatha okuningi njengoba nje fantasy utshela nombhali umsebenzi (mhlawumbe isigamu sehora, noma ngezinye izikhathi eside). Phakathi nalesi sikhathi, bobabili abalingani ukuzwa orgasms eminingi, bese alpha ukhiqiza omningi isidoda.
Akukhona nje-ke uyakwazi kuwamangaze omegavers uhlobo. Fanfiction ukuthuthukisa kuphela izici zalesi yonke.
The elula ukuqonda ekilasini. Beta akuhlukile abantu abavamile. Bavame ushade nomunye, ngakho kukhona ukwehlukana amadoda nabesifazane ukudlala indima enkulu kunangesikhathi alpha and omega. Basuke bavunyelwe kuthathe izikhundla abaholelwa kahle, yemsebenti kufanele cishe akukho kwemingcele. Ubopha uhlamvu komunye ezintathu amakilasi ichaza isikhundla salo umphakathi ngemisebenzi omegavers uhlobo.
Uyini ukusatshalaliswa esibhekwa njengohlelo esifuze esidlule ekuphileni kwangempela, ukhohlwe kule yonke? Ukuze siphendule lo mbuzo, kumelwe sibheke futhi umthombo uhlobo.
Babephethe impisi kuphela ngabanye olunamandla Uyakufanelekela ukuthatha indawo umholi. Labo babuthakathaka, abazingeli futhi waphila ukuphila okuvamile, kahle, bexhwalile kakhulu isilwane abameli uphikisana azame ukuphuma lonke ulaka. Ngokusho kweminye imithombo, beta omegaverse ukwazi okufanele sisabele ngayo lapho iphunga omega, lapho efikayo ukushisa, ngakolunye, basuke akhangwa kakhulu-alpha. Eqinisweni, bonke futhi oba kuphela isifiso nombhali umsebenzi.
Uhluke ngokuphelele-alpha. Uma uyintombazane, ukuthi lihlukaniswe nabanye kuba nzima kakhulu, njengoba nje kuvamile namanje ingxenye enkulu zonke ethambile, ukusungulwa elicwengiwe. Endabeni izimpawu Man zisobala: uphansi futhi mafutha.
ubudlelwane Ongqingili phakathi kwala madoda amabili akuyona into engavamile e-omegavers uhlobo (siyini lesi, uyazi), futhi kuqinisekisa idivayisi ubulili omegas uhlelo. ingquza yabo luyatholakala kwi isimiso esifana emomozini sowesifazane, kwesibeletho iyatholakala. Ukukhuluma ulimi oluhlukile, umuntu ukucabanga. Ngaphezu kwalezi zici, Omega, futhi abafana namantombazane babhekana estrus njalo ngezikhathi ezithile. Kule nqubo, Zikhiphela iphunga eyinqaba, maddening yazo zonke alphas wabanjwa eseduze. Uma Omega akuyona umlingani unomphela, he jikisa ilitshe lwangempela ngabanye.
Ngokuvamile, owesilisa noma owesifazane uzama ukumbopha indlu, noma zithathe usuku lokuphumula emsebenzini, hhayi enkingeni, noma usebenzise makha iphunga Hitters. Analogue kukhona amaphilisi ekhethekile. Ngokomthetho we uhlobo, omega akawuthandi unikeze abanye bengabakaJehova lesi sifundo, futhi okusele ngazo zonke izindlela ukuba ulifihle. Ukubudlelwano nomlingani lingumthetho owawuthi alpha main emkhayeni. esaphila Omega uyalalela uyise, ubhuti, kamuva induna.
Fans of lolu hlobo lobuciko wayengekho wasindisa futhi omegavers. Manga kule uhlobo imzuzele ezingengaphansi ethandwa kuqhathaniswa fanfiction. Ngokuyisisekelo imidwebo abalandeli 'umkhiqizo osuphelile. Elinye lawo libizwa ngokuthi "Umakhelwane Wami Levi" futhi senziwe yaoynogo isisekelo Yokubhangqa izinhlamvu ezimbili eziyinhloko edumile umsebenzi "Attack on Titan", muva nje ukuba anqobe abalandeli abaningi emhlabeni jikelele.
Akukona nje kuphela ukuthi umkhiqizo intandokazi abalandeli of ubudlelwano angajwayelekile. Okunjalo ethandwa anime amahlaya efana "Naruto" uchungechunge futhi abanye futhi bahlaselwa esisuka fantasy abalandeli.
Fundisa izingane indaba mayelana nebhere?
Uyini Ekupholiseni iyunithi ongaphandle ngaphandle